Ezinụlọ Na-enwe Obi Ụtọ​—⁠Na-arụsi Ọrụ Ike
Ịrụsi ọrụ ike dị ka imega ahụ́, ọ ga-abara gị uru ugbu a nakwa n’ọdịnihu
Ndị na-arụsi ọrụ ike anaghị agbara ọrụ ọsọ. Kama, obi na-atọ ha ụtọ ịrụsi ọrụ ike iji nweta ihe ndị ha ga-eji gboo mkpa ha, nakwa iji nyere ndị ọzọ aka ọ bụrụgodị na ọrụ ha na-arụ bụ ọrụ a na-eleda anya.
Nke bụ́ eziokwu bụ na e nwere ọtụtụ ihe mmadụ kwesịrị ime ná ndụ ma ọ̀ chọrọ ya ma ọ chọghị ya. N’ụwa a ọtụtụ ndị na-anaghị enwe mmasị ịrụsi ọrụ ike, ịrụsi ọrụ ike ga-abara gị uru.—Ekliziastis 3:13.
Otu nwoke aha ya bụ Reyon kwuru, sị: “Ahụla m na ọ bụrụ na mmadụ ana-arụsi ọrụ ike, ọ ga na-enwe obi ụtọ. M na-enwekwa ụdị obi ụtọ a n’ihi na m na-arụsi ọrụ ike. Mmadụ iji ọrụ ya kpọrọ ihe na-emekwa ka ndị ọzọ na-akwanyere ya ùgwù.”
IHE BAỊBỤL KWURU: “Uru dị n’ụdị ndọgbu n’ọrụ niile.”—Ilu 14:23.
Ime ihe ndị na-esonụ ga-enyere gị aka ịna-ele ọrụ anya otú kwesịrị ekwesị.
Mee ka ịna-eme ihe nke ọma mara gị ahụ́. Ma ị̀ na-arụ ọrụ dịịrị gị n’ụlọ ma ị̀ na-eme ihe omume e nyere gị n’ụlọ akwụkwọ ka i mee n’ụlọ ma ị̀ na-arụ ọrụ i ji akpa afọ gị, jiri obi gị niile na-arụ ya. O nwee ihe ị mụtara otú e si eme ya, chọọ otú ị ga-esi na-emekwu ya nke ọma. Dị ka ihe atụ, otú ị ga-esi na-eme ya ngwa ngwa ma ọ bụ otú ka mma. Ka ị na-arụkwu ọrụ gị nke ọma, ka ọ ga na-atọkwu gị ụtọ.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ị̀ hụwo onye nwere nkà n’ọrụ ya? Ọ bụ n’ihu ndị eze ka ọ ga-eguzo; ọ gaghị eguzo n’ihu ndị nkịtị.”—Ilu 22:29.
Na-eche gbasara ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ gị nke ọma, ọ na-abara ndị ọzọ uru. Dị ka ihe atụ, ị na-arụ ọrụ dịịrị gị n’ụlọ nke ọma, ọ ga-eme ka ihe dịrị ndị ezinụlọ unu mfe.
Na-eme karịa ihe a tụrụ anya n’aka gị. Kama ịna-arụ ọrụ e kenyere gị naanị iji mezuo iwu, gbalịa na-eme karịa ihe a tụrụ anya n’aka gị. Ọ ga-egosi na i ji obi gị niile na-eme ya, ọ bụghị n’ihi na a manyere gị amanye.—Matiu 5:41.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ka omume ọma gị wee si gị n’obi, ọ bụghị ná mmanye.”—Faịlimọn 14.
Arụgbula onwe gị n’ọrụ. Ndị na-arụsi ọrụ ike anaghị adị umengwụ, ha anaghịkwanụ arụgbu onwe ha n’ọrụ. Ha na-arụsi ọrụ ike, ma ha na-ewepụtakwa oge ha ji ezuru ike.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Obere ezumike dị mma karịa ịrụsi ọrụ ike gabiga ókè na ịchụso ifufe.”—Ekliziastis 4:6.
Lee ihe ụfọdụ Baịbụl kwuru ga-enyere gị aka ịna-enwe obi ụtọ n’ọrụ gị.